ỤGBỌ ELU AIR PEACE ADAALA NA DUBAI – hoo!haa!!
ỤGBỌ ELU AIR PEACE ADAALA NA DUBAI
Dubai: Ụgbọelu Air Peace nọrọ taa were daa n’ọdụ ụgbọelu Sharjah-Dubai iji mejupụta nkwa nke ụlọ ọrụ njem ụgbọelu ha kwere na ha ga-amalite ifega mba ofesi.
Site n’ikike ọ natara maka ifega mba ofesi, njem a ụgbọelu a mere taa bụ mbụ. N’oge na-adịghị anya, atụkwara anya na Air Peace ga-amalite ịgakwa mba ofesi ndị ọzọ.
Ya bụ ụgbọelu B777 nke onye nya ya bụ Capt. Victor Egonụ bụ onyeisi ọkwọ ụgbọelu na Air Peace hapụrụ Ọdụ Ụgbọelu Njem Ofesi Murtala Muhammed, Ikeja ka ọ jiri nkeji iri n’ise were gara elekere iri nke ụtụtụ ụnyaahụ bụ Fraịdee ma rute kwa n’ọdụ ụgbọelu Sharjah-Dubai ka ọ jiri nkeji iri were gara elekere itoolu nke ụtụtụ taa bụ Satọdee.
Ndị nwere agba soro ụgbọelu mee njem ahụ gụnyere Onyeisi oche, Air Peace, Mazi Allen Onyema, Onye bụbu Gọvanọ Anambara Steeti , Mazi Pita Obi tinyekwara Onyeisi Mahadum nkụzi ịkwọ ụgbọelu nke bụ International Aviation College, Ilorin, bụ Mazi Benjamin Adeyileka.
N’okwu ọ gwara ndị nta akụkọ ka igwe mmadụ gụnyere ndị ọnụ na-eru n’okwu n’obodo ahụ nakwa ndị isi nnọchiteanya mba Naijiria n’obodo okwu, Mazi Onyema sịrị na ha azụọla nnukwu ụgbọelu B777 anọ maka ime njem mba ofesi dị anya.
Ọ kwukwara na ya bụ ụlọ ọrụ ụgbọelu nke malitere ọrụ n’abalị iri abụọ n’anọ nke ọnwa Ọktoba, afọ 2014 na-efegazị mba dịgasị iche iche dịka Ghana, Liberia, Senegal, Gambia na Sierra Leone.
hoo!haa!! na-asịzị “Air Peace, jide ka i ji na onye a sị ya jide ka o ji na-eme nke ọma”. N’otu aka ahụ, hoo!haa!! na-akpọkukwa ụmụ amaala Naijiria ka ha donyere ụlọ ọrụ ụgbọelu ukwu site na iso ha eme njem
Previous Post: ABỊRỊBA EMEELA MMEMME IRIAMA
Next Post: NCHETA ỌMỤMỤ NEKY